Inguqulelo entsha yeKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25 ngoku iyafumaneka | Ubunlog
Inyanga nenyanga Ukuhlaziywa kweKhowudi yeVenkile yeVidiyo kufunyenwe kwaye inyanga kaJuni ayibanga njalo, kule khowudi intsha yeVenkile yeVenkile 1.25 yokuhlaziya umhleli wekhowudi Iza neempawu ezintsha kunye nokulungiswa kwe-bug ngokusekwe kuhlobo lwayo lwangaphambili.
Kwabo abangayazi le nkqubo ndingakuxelela lonto Ikhowudi yeVenkile yeVenkile sisimahla kunye nomhleli wekhowudi yemithombo evulekileyo eyenziwe nguMicrosoft kwaye isasazwa phantsi kwelayisensi ye-MIT.
1 Malunga neKhowudi yeVenkile yeVidiyo
2 Yintoni entsha kwiKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25
3 Uyifaka njani iKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25 kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Malunga neKhowudi yeVenkile yeVidiyo
Ikhowudi ye-Visual Studio ngumhleli weplatform ezininzi ukuze isetyenziswe kwiWindows, Linux nakwiMacOS, Isekwe kwi-Electron kunye neNode.js kwidesktop leyo isebenza kwiinjini zoyilo zeBlink. Kubandakanya ukuxhaswa kwe-debugging, eyakhelwe-ngaphakathi kulawulo lwe-Git, ukuqaqanjiswa kwes syntax, ukugqitywa kwekhowudi eyi-smart, ii-snippets, kunye nekhowudi ephinda isebenze
Kwakhona inokwenziwa ngokwezifiso, ke abasebenzisi banokutshintsha umxholo womhleli, iindlela ezimfutshane, kunye nokukhetha.
Phakathi kweelwimi ezininzi ezikhankanyiweyo iKhowudi yeVenkile yeVidiyo unekhowudi yokugqibezela ikhowudi, eyenza ukuba ibe lolona khetho lubalaseleyo.
Yintoni entsha kwiKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25
En olu hlaziyo lutsha ukusuka kumhleli wekhowudi ukubandakanywa komsebenzi omtsha "we-grid view" kunokugqitywa, esivumela ukuba sivule uninzi lomhleli windows sisahlula le yangoku kwaye ke sinokufikelela kwi-4 windows yokuhlela ikhowudi kwiscreen.
Lo msebenzi uluncedo kwaye ungcono ngakumbi kunenkxaso yokuvula iifayile kwiithebhu, Ewe, sinalo mzuzu ukubonwa kwekhowudi kwaye akufuneki sitshintshe ukusuka kwithebhu ukuya kwi-tab.
Elinye inqaku elinokuqaqanjiswa ngumbono "wolwandlalo" Uya kuwufumana lo msebenzi sele usebenza kule nguqulo intsha kwaye iya kwenziwa ngokungagqibekanga.
Ngokusisiseko lo msebenzi usinika wona licandelo elahlukileyo ezantsi kuMhloli weFayile. Xa yandiswa, iya kubonisa umthi wesimboli somhleli osebenzayo ngoku.
Entre omnye wemisebenzi emitsha onokuyifumana yi "indlela ephathekayo" Lo msebenzi usivumela ukuba sihambise ubumbeko lweKhowudi yeVenkile yeVidiyo ngokusebenzisa imithombo yeendaba ephathekayo enje nge-USB, iCD, iDVD okanye nayiphi na imithombo yeendaba enokwabiwa ngedatha kuyo. Inkxaso yokukhuphela kwifomathi ye-ZIP kwiWindows nakwiGNU / Linux nayo ifakiwe. kunye nokusetyenziswa kwesiqhelo kwi-macOS.
Okokugqibela, omnye wemisebenzi emitsha esinokuthi siyibonakalise kolu hlobo lutsha kukubandakanywa kwesixhobo sokulungisa okungahambi kakuhle.
Ngale nto, ngaphandle kwento abayenzayo ngaphakathi komhleli xa besenza iphutha kwikhowudi yabo, baya kuhlala benebar yesixhobo edadayo ebonakalayo evumela ukuba itsalwe kwindawo yomhleli.
Oku kuya kunceda abasebenzisi abasebenzisa iithebhu zomhleli, kodwa bafuna ukubona ibar yesixhobo sokulungisa ingxaki ngalo lonke ixesha.
Uyifaka njani iKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25 kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Si Ngaba ufuna ukufaka lo mhleli wekhowudi kwindlela yakhoUnokwenza oko ngokuya kwiwebhusayithi esemthethweni yeprojekthi nakwicandelo lokukhuphela unokufumana isifaki senkqubo.
Okanye ungavula i-terminal nge-Ctrl + Alt + T kwaye uza kwenza omnye wale miyalelo ilandelayo.
Kwiinkqubo ezingama-64 kufuneka uthayiphe:
Kulungiselelwe abo banenkqubo engama-32, kufuneka bachwetheze:
Yiyo ke loo nto, siza kuba nomhleli efakwe kwinkqubo yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Inguqulelo entsha yeKhowudi yeVenkile yeVidiyo 1.25 ngoku iyafumaneka